रिलीज मिति तोक्दै ‘दि कर्मा’ को अफिसियल पोस्टर रिलीज - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper
काठमाण्डौ। नेपाली चलचित्र ‘दि कर्मा’को अफिसियल पोस्टर रिलीज भएको छ । माघ १७ गतेलाई रिलीज मिति तोक्दै प्रचार प्रसारका पहिलो सामग्रीस्वरुप पोस्टर रिलीज गरिएको निर्माता जय राज रायले बताए ।
चलचित्रलाई देव कुमार श्रेष्ठले निर्देशन गरेका हुन् । नेपाल र भारतको सिमा क्षेत्रमा हुने घटनामा बनेको उक्त फिल्मलाई रामेश्वर कार्कीले छायांकन गरेका छन् । जय मिडिया म्यानेजमेन्ट र श्रीत मिडिया एण्ड इन्टरटेन्मेन्टको ब्यानरमा बनेको ‘दि कर्मा’को कथा निर्माता जय राज राय आँफैले लेखेका हुन् । रायसँगै श्रीदेव बि.एल. र निशा खतिवडा निर्माता रहेको यस चलचित्रमा शारदा खड्का अर्याल सह निर्माताको रुपमा छन् ।